Huizhou Jinhaocheng Non-tenona Fabric Co., Ltd.
Huizhou Jinhaocheng Non-tenona Fabric Co., Ltd, izay naorina tamin'ny taona 2005, miaraka amin'ny orinasa trano nandrakotra ny faritra 15.000 metatra toradroa, dia matihanina simika fibre nonwovens famokarana-mirona enterprise.Our dia tonga saina tanteraka orinasa famokarana mandeha ho azy, izay mety hahatratra tanteraka isan-taona famokarana fahafahana 6000 taonina mahery andalana ao am-polony famokarana Wikibolana anglisy. Any in Huiyang District, Huizhou City of Guangdong Province, izay misy roa haingam-pandeha ny niampita. Ny orinasa tia fanatonana amin'ny fitaterana mety afa-tsy 40 minitra mitondra fiara avy any Shenzhen Yantian Port sy 30 minitra avy Dongguan.
Ny vokatra dia mizara ho: Needle totohondry Series, Spunlace Series, mafana nampikambana (Hot rivotra amin'ny alalan'ny) serial, Hot Rolling serial, Quilting serial sy Lamination Series.Our vokatra fototra dia: multifunctional loko nahatsapa, tsy pirinty-tenona, fiara lamba anatiny, injeniera tontolo geotextile, karipetra base lamba, herinaratra bodofotsy tsy tenona, ny fahadiovana mamafa, mafy landihazo, fanaka fiarovana fandriany, kidoro pad, fanaka padding sy others.These tsy tenona vokatra dia be mpampiasa, ary tafiditra ao amin'ny sehatra isan-karazany ny fiaraha-monina maoderina, toy toy ny: fiarovana ny tontolo iainana, fiara, kiraro, fanaka, kidoro, akanjo, poketra, kilalao, sivana, fitsaboana, fanomezana, fanampiana herinaratra, raki-peo fitaovana, injeniera fanorenana sy ny orinasa hafa. Mamorona toetra mampiavaka ny vokatra, isika, dia tsy vitan'ny fangatahana nihaona an-trano ihany koa, fa naondrana tany Japon, Aostralia, Azia Atsimoatsinanana, Eoropa sy ny toeran-kafa ary koa ny mankafy ny laza avy amin'ny mpanjifa avo maneran-tany.
Kalitaon'ny vokatra avo no fototry ny orinasa. Amin'ny paika sy controllable rafitra fitantanana, dia efa nahazo ny ISO9001: 2008 toetra rafitra fitantanana ny taratasy fanamarinana. Rehetra ny vokatra dia ny tontolo iainana sariaka sy niakatra ho any ny tonga, fahadiovana sy ny PAH, azo, mifanila benzene 16P, formaldehyde, GB / T8289, EN-71, ny F-963 sy fitsipika Britanika BS5852 afo lelafo retardant fitiliana fisorohana fitsipika. Ankoatra izany, ny vokatra ihany koa ny manaraka ny RoHS sy fitsipika OEKO-100.
Mba hitazonana ny fifaninanana ny vokatra, ny orinasa lehibe mandoa tsara ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra vaovao, indrindra nanangana R & D departemanta, ka efa mandroso fitaovana amin'ny fitaovana ary koa hentitra, zava-misy, matihanina, sy ara-teknika mpiasa. R & D asa mifantoka amin'ny vaovao ara-nofo sy ny teknolojia fampandrosoana fironana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, toy ny isan-mpanjifa 'ilaina, fampandrosoana vaovao lamaody sy avo-teknolojia tsy tenona products.At ankehitriny, ny orinasa ankapobeny R & D ambaratonga, dia nampiarahina tamin'ny tsena iraisam-pirenena tinady, ary nanome antoka ho an'ny mahery ny ezaka fampandrosoana ny orinasa mpitarika vokatra.
Ankoatra ny hividy-teknolojia avo ilaina manokana amin'ny raharaham-barotra ny fampandrosoana, ny orinasa dia iray amin'ireo orinasa tsy voatenona mpisava lalana izay ampiharina ho maro patented vokatra sy ny fitaovana vaovao. Ny orinasa ny fototra manaraka ny filozofia ny "maha-matihanina, tsy fivadihana sy ny zava-baovao", ary ny fitantanana tanjona ny "fanaovana ny marina, tsara aloha, ny mpanjifa voalohany". Manohy hijery mavitrika, dia ataovy eo an-tampony, ary ny mpiara-mamorona "handresy-fandresena" hoavy mamirapiratra aminareo!